Uninzi ethandwa kakhulu ividiyo incoko 'Incoko Roulette'
Uninzi ethandwa kakhulu ividiyo incoko ‘Incoko Roulette’
Kwinkqubo yethu videochat macala kuba ukubona ngamnye enye. Ngoko ke, ukuba ufuna izinto ezintsha ukuya kwiwebhusayithi yethu ethi, ngoko qala kufuneka siqale imimiselo yakho webcam. Xa yakho ikhamera iyafakwa kwaye kwenkqubo qala ‘iyajikeleza ivili’, ukwenza oku nqakraza khangela iqhosha. Ngokukhawuleza umdlali kucela imvume yakho ukuze ufikelele yakho webcam, cofa vumela. Ukuba ufuna musa na ekhoyo imvelaphi, ngoko ke iyajikeleza ivili kwakhona. Kodwa ukumbule, ngokunjalo uya kwazi ukuba ‘esongwayo’ kunye nawe. Ngoko ke, musa rush ukufumana omtsha umhlobo, musa unobuhle i ithuba ukuhlangabezana umdla abantu. Thina remind ukuba thina, ngayo nayiphi na decent ndawo inephepha layo imithetho ukuziphatha.
Ngokufutshane, sisebenzisa prohibited: na izenzo ezingekho mthethweni, ezingafanelekanga ukuziphatha, spam, erotica. Ukumbule ukuba umlingane wakho unako imbali yakho yevidiyo okanye ukugcina i-screenshot ukuba umfanekiso wakho. Siyathemba kuwe liked yenza entsha abahlobo kwaye incoko wethu roulette. Ukuze hayi oza kuphulukana nayo nabo nayiphi na kuni companion macla yakho ozithandayo. Nqakraza kwi ‘dibanisa efayilini’ iya kuvela emva omfutshane ixesha fellowship ukwimo inkwenkwezi etyheli kwi-ividiyo ye-interlocutor.
Ungakhe ukufumana umhlobo ukusuka yakho ozithandayo uluhlu
Ukuba yakho esikhethiweyo uqhagamshelane ngu-intanethi, uza kukwazi ukubiza kuye.
Ngoko ke wena musa kuphulukana nayo nganye enye
Ukuba ufuna ukufumana ubukhulu amathuba, sicebisa ukuba uthenge i-VIP-akhawunti. Ukuthenga i-VIP-akhawunti iya kuphakamisa i-izithintelo kwaye kuvumela ukuba umnxeba nabani yokuposa kwi-roulette. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye ingxelo malunga zethu ividiyo inkonzo, siya kuba ndonwabe ukuphendula kwabo.
Ukwenza oku, qhagamshelana inkxaso
Ukuhlangabezana kwi-Brazil kuba ngesondo. Umfazi ezama umntu kuba ngesondo →